Ka shaqaynta luqadda dabiiciga ahi waa laanta sirdoonka macmalka ah ee ka shaqaysa abuurista, fahamka iyo falanqaynta luuqadaha aadamuhu si dabiici ah u adeegsado si ay ula xiriiraan kumbuyuutarrada hanaan hadal iyo qoraal labadaba iyadoo la adeegsanayo luuqadaha aadanaha ee dabiiciga ah halkii laga isticmaali lahaa luqadaha kumbuyuutarka. Sirdoonka macmalka ah waa injineernimada iyo sayniska dhismaha iyo dhismaha barnaamijyada kombiyuutarka caqliga iyo mishiinnada. Kuma koobna oo keliya farsamooyinka bayoolaji ahaan la arki karo oo la xidhiidha fikradda ah adeegsiga kombuyuutarrada si loo fahmo caqliga aadanaha.
Hababkii ugu dambeeyay ee loo maro NLP waxay ku saleysan yihiin barashada mashiinka, halkaasoo xogta lagu quudiyo mashiinka barashada iyadoo la adeegsanayo ficil kasta iyo quudinta ficil la aanta ah ka dibna hawsha ay si otomaatig ah u socoto iyadoo aan si joogto ah looga baahneyn faragelin aadanaha ama gacanta Barashada mashiinka ayaa u saamaxday kombiyuutarada inay helaan aragtiyo qarsoon, iyadoo la adeegsanayo algorithms ay si isdaba joog ah uga helaan xogta la siiyay, iyadoo aan si cad loo baarin meesha laga raadinayo. Inta badan cilmi baarista lagu sameeyo ka baaraandegidda luqadda dabiiciga ah waxay ku saabsan tahay raadinta, gaar ahaan raadinta shirkadaha. Waa kartida barnaamijka kumbuyuutarka si loo fahmo hadalka aadanaha sida loogu hadlo.
NLP inta badan loo yaqaan luqadaha xisaabinta waxay leeyihiin shaqooyin qaarkood oo ku lug leh sida soo saarista magaca, falanqaynta qoto dheer, kala goynta jumlada, xallinta wada-tixraaca, calaamadeynta qeyb ka mid ah hadalka, iyo baaritaanka. Waa qaybta diiradda saareysa isdhexgalka ka dhexeeya kumbuyuutarrada iyo luqadda aadanaha. Waxay ku fadhidaa isgoyska sirdoonka macmalka ah, cilmiga xisaabta, iyo sayniska kombiyuutarka. Raadin kasta oo la adeegsanayo ka baaraandegidda luqadda dabiiciga ah, barnaamijka laftiisa ayaa aqoonsan doona erey kasta oo la soo gaabiyo ama soo gaabiyo. Caqabada ayaa ka taagan halka ay tahay in kumbuyuutarradu fahmaan habka aadanuhu u adeegsado una barto luqadda. Afka aadamuhu maaha mid aad u fudud mana aha mid sax ah. Kombiyuutarada si ay u fahmaan luqadda aadanaha, waxay u baahan yihiin inay fahmaan fikradaha iyo isku xirnaantooda ereyada si ay u abuuraan jumlad macno leh. Tusaale ahaan, tixgeli bayaan "Ilmuhu liqaa duuli." Hadda, tani waxay yeelan kartaa macno kala duwan taasoo ka dhigaysa mid ku adkaata barnaamijka inuu fahmo macnaha saxda ah ee ka dambeeya. Sida erayga duul ama liq waxaa loo adeegsadaa ficil ahaan, taas oo ilmaha ka dhigaysa sifooyin ama magac. Inta lagu guda jiro isgaarsiinta aadanaha, macnaha jumladaha waxay kuxirantahay labada fahmo ee qofwalba madmadowga kujiro luuqadaha aadanaha iyo macnaha guud ee lagala hadlay. Tani waa meesha ay tahay in barnaamijka lagu diyaariyo barnaamijka si loo fahmo qaab dhismeedka luqadeed iyo macnaha guud.
AI wuxuu noqonayaa sida ugu cusub ee aan ula falgalno aaladaha aan wadno oo dhan; baabuurtayada, qaboojiyaha, taleefannada gacanta, albaabka hore iyo nidaamka kululaynta dhexe. Waxaan degnaan lahayn adduun had iyo jeer ah. Sameynta qalabkeenna si aan u saadaalinno ujeedkeenna isla markaana aan u fahamno xaaladdeena hadda jirta waa qaaciddada lagu dhiso alaab aad u maskax badan. Bilyan ku xiran 'waxyaabo' ayaa hadda si firfircoon uga codsanaya taageerada barnaamijyada AI.